PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - Uvundula amasekeni
Uwaphendula imfashini yesimanje
Ilanga - 2018-07-09 - Izindaba - AYANDA BUTHELEZI
ISISHO sesiNgisi esithi “fashion is timeless” (Imfashini kayibekelwe sikhathi), sihambisana ncamashi nelebuli iTinz Clothing kaNipho Burd (24), egxile kakhulu ezingutsheni ezingamasekeni.
NgoLwesine le ntokazi yaseGlenwood, eThekwini, yethule ngokusemthethweni i-# FashionFirstThursday, okuwumbukiso odidiyele umculo nokukhangiswa kwemfashini engamasekeni etholakala kuma- thrift shop noma kodunusa - okuyigama elidumile isizinda samasekeni esibizwa ngalo.
Lo mbukiso obuseCuriosity, enkabeni yeTheku, ubukhangiswe ngamamodeli ezinhlanga ezahlukene ngaphansi kwengqikithi ethi “Timeless Style.”
Kusukela ezingutsheni ebezigqokiwe, amabhuzu, wukupendwa kobuso, uhlobo lomculo obudlalwa nemihlobiso ( props), konke bekukuthatha kukubeke esikhathini lapho imfashini ibikwenza ugqame wedwa, kungafani nesikhathi samanje lapho bonke abantu begqoka ngokufaniselana.
UNipho uthi okumgqugquzele ukuba ethule lo mbukiso osuzokwenzeka njalo ngoLwesine lokuqala enyangeni, wuthando lwemfashini nokuvula inkundla eyehlukile kubathandi balo mkhakha lapho bezohlanganyela khona balalele umculo, bazitike ngemibukiso engasatholakali kalula emakethe.
“Kusukela kudala bengihehwa yizingubo ezazidla ubhedu phambilini. Uma ngigqokile bengihlale ngiqinisekisa ukuthi kangihambisani nama- trend ngoba aphelelwa yisikhathi. Yikhona lokhu okungidonsele amehlo kubantu ngoba bebehlale bengibuza ukuthi ngizithengaphi izingubo zami.
“Ngo-2015 nginqume ukusungula iTinz Clothing ngenxa yesasasa futhi ngenzela ukuba kube lula kwabathanda lolu hlobo lwezimpahla ukuba bazithole eduze, kwazise abaningi abathandi ukubonakala beyovundulula emasekenini.
“Engikuthandayo ngamasekeni wukuthi asemgangathweni futhi akwenza wehluke eningini ngoba imvamisa uthola into yakho wedwa,” kusho uNipho.
Uthi uthando lwemfashini kakusikho nje kuphela ukubukeka kahle, kodwa kuwubuciko ngoba kumele ukwazi ukuhlanganisa “amavununu” abe yisithombe esihehayo kwabakubukayo uma usugqokile.
Yilowo myalezo athi ufuna iTinz Clothing iwudlulise kubathandi balolu hlobo lwezingubo. Kuchachamba ubuso uma echaza ngosaziwayo afisa ukumgqokisa.
“Ngiyafisa ukusebenzisana nomrepha uNasty C. Uyikho konke engikubona kumuntu ongaba wubuso beTinz Clothing,” Le lebuli iyatholakala ezinkundleni zokuxhumana ngaphansi kwesibambo esithi @tinz_clothing.
UNIPHO Burd onelebuli iTinz Clothing egxile kakhulu ezingutsheni ezingamasekeni.